How kukwereta musi Tele2 kuti recharge
Mumwe achiputa cellular kunogona pakarepo nemamiriro ezvinhu apo mari foni pamusoro, asi achiri kudiwa kwokukurumidzira kuti chinokosha kudanwa, uye zadzai nechiyero, zvinosuwisa, hapana. Haasi munhu wose, vachisiya kure neguta, pachine muzadze foni bhiri. Asi sezvineiwo, hapana mamiriro ezvinhu tariro, kunyanya kana uri nemhosva pamusoro Mobile opareta Tele2. dzaishandisa akawanda kare akagadzirirwa makasitoma ayo akasiyana-siyana mabasa kuti zadzai nengaidzo tichibatsirwa Zvikwereti zvakaita zvidiki. Asi pano ari kuti kutora chikwereti Tele2? Zviri nyore, uye ikozvino muchaona woga.
How kukwereta musi Tele2 kushandisa basa "Yakapikirwa mubhadharo '
Nyaya iyi inowanika kuti anenge munhu wose. Zvisinei, zvinoitika, vose Tele2 vanokwereta, vakawanda vanoshandisa samambure handizivi. Uye kuti nyore chaizvo. Kuti aite izvi, unofanira kushingaira kushandisa foni mabasa opareta pamusoro kwenguva. Uye kukosha kwayo achavaponesa yomunharaunda nharaunda, uye kuwana siyana kubvira 120 kusvika 180 mazuva. Naizvozvo, sei kukwereta pana Tele2, zvinoshingaira User is zvichiva pachena.
Uyezve, pane dzimwe ezvinhu chokuwana Zvikwereti zvakaita zvidiki. zvinoti:
Zviyero panguva nhoroondo Mobile opareta rinotengeswa nevaridzi hazvifaniri kuva kupfuura 30 rubles;
Minimum Chiyero kunogonawo zvakasiyana, zvichaita pakuti sei uye kana kukosha munguva kubva rinotengeswa nevaridzi kuti nzvimbo: kumwe zvinofanira kuva zero, uye mune dzimwe nzvimbo inogona kuenda zvishoma zvishoma. Chidzore nani kushandisa pamutemo nzvimbo kambani Tele2, achisarudza achida nzvimbo uye nekudzvanya yakakodzera chikamu basa voga vanhu, uye ipapo kuenda "Services" chikamu. Ndipo pachava inodiwa chikamu - "Mikana pa razero", apo unogona kuwana mamwe mashoko sei kuti kukwereta pana Tele2, nokuti yakareba sei uye sei.
basa iri hakudi kuti kwakabatana pachine asi kushandiswa kwayo nokuti nhoroondo nomumwe achaparadzwa kupfurwa muripo weUS 1 Ruble. mari iri deducted kubva pakuenzanisa mufambo vachishandisa chivimbiso muripo, izvo chakagamuchirwa kare.
Zvikwereti zvakaita zvidiki unozvipiwa kwenguva isingadariki mazuva matatu. Pakazosvika nguva yake kudzoka nhoroondo yako kuti kukasawedzerwa kune shoma uwandu 31 rubles 30 rubles pachake yakapikirwa muripo, uye 1 Ruble - ndarayirwa kuti kushandisa mubasa iri.
Kakawanda unogona kuwana "Yakapikirwa muripo" uyewo dzinosiyana zvichienderana munzvimbo cellular worunhare wacho subscribers.
Pakadaro, kana uri kugutsikana, uye muchida kushandisa basa iri, unofanira kutumira kubva foni yako inotevera USSD-murayiro * 122 #. Nechekare pakupindura nayo awakagashira itsva meseji ichange iine zvose mirayiridzo Activate mashoko "Yakapikirwa muripo".
How kukwereta pana Tele2, ino vaverengi munotoziva, asi ndinoda kupa zano chinobatsira kuti zvichava inobatsira iri chiitiko kuti iwe une yako yefoni bhiri iri kusvika nokukurumidza razero. Unogona batanidza pachako basa akadai "Avtoplatezh". basa iri riri kuti kana pakati nepakati rikawira pasi imwe chikumbaridzozve, zvinonzi zvaitika kukasawedzerwa ne mari wakasiyiwa iwe pachine. Imwe zvakaipira muripo kwakadaro ndechokuti iripo chete vatengi kusvikira mumari Bank, vane debit nemakadhi. Asi kana ukaita zvichava yakakunakira, unogona kuzarura rokubhengi uye zadzai paro mari kuti nharembozha mubhadharo ari otomatiki nzira. Sarudzo kare zvako!
Maternity guta guru rekutengesa imba: zvinonyanya kukosha
"Mobile rwezvemabhengi", Sberbank. "Mari" pasuru: chii chinobatanidzwa mariri?
Unoda mari pane foni mune chikwereti? "MegaFon" inobatsira vatengi vayo
Fast Check-mu "Yandex". How kushandisa chikwama
Deposition: chii. Kuiisa mari, zvinokosha uye mabasa
Chii wmz, uye nei chikwama yakakurumbira iyi saka
Ginseng Mahwendefa: kurayira manual, wongororo
Sei restart pahwendefa wako kana akaturikwa?
Trigeminal tsinga. Mabatirwo zvavo mishonga
Vanotongwa mutemo wehurumende - huru Vatori yevagari turnover
How kubika zviyo, nyoro uye manune: a zvakavanzika shoma
Ugororo Article 163 yemutemo weCriminal Code of Russian Federation nemashoko: kushanda yokuenzanisira
How kurapa chirwere chikosoro? Yakanakisisa pakurapa
Catfish: kubatsirwa uye kukuvadza, mafuta uye mifananidzo
Ceramic blocks "Porotherm" (Porotherm): zviyero, unyanzvi hwemagetsi
Chitofu kudziyisa. Projects vane chitofu kudziyisa dzimba. Chitofu kudziyisa ari yemapuranga imba